Fampianarana iray isaky ny dingana: effets an-tsary tantara an-tsary ao amin'ny Adobe Illustrator | Famoronana an-tserasera
Lua louro | | sary, Tutorials
Voalohany indrindra, hazavao fa ity tutorial Namboarina tamin'ny Adobe Illustrator CS5 (amin'ny teny Anglisy), noho izany ny sary tsikelikely dia mampiseho ny fampiasa an'io kinova io. Na dia izany aza, azonao atao ny manandrana azy amin'ny kinova rehetra anananao, ka raisina an-tsaina fa mety handoa vola kely kokoa ianao hanarahana ny lesona.
Ity vokatra ity dia mety mahasoa rehefa manao a famolavolana tsy ara-potoana izay iarahan'ny fomba tantara an-tsary ny zavatra tianao ampitaina. Eto izahay dia manome torolàlana iray tsikelikely mba hahafahanao manatratra ny vokany amin'ny tantara an-tsary amin'ny Adobe Illustrator.
1 Vokatry ny tantara an-tsary
1.2 Fiverenana mandoko
1.6 MANAMPY NY STYLE
Vokatry ny tantara an-tsary
Manokatra Adobe Illustrator izahay ary mankany mamorona antontan-taratasy vaovao (Mac: Cmd + N Windows: Ctrl + N). Azontsika atao ny manome anarana an'izay tadiavintsika ary misafidy ny haben'ny rakitra. Raha ny amiko dia nisafidy 570 x 300 px aho, ny endrika ampiasainay amin'ny Creativos Online handefasana ireo sary.
Zava-dehibe tokoa fa, eo amin'ny farany ambanin'ny boaty fifanakalozan-kevitra (Advanced), azonao antoka fa nanisy marika ianao hoe Color Mode the RGB, Raster Effects amin'ny Screen (72 ppi) y Preview Mode Default. Raha vantany vao manana ny safidinao voafidy ianao dia tsindrio OK.
Hanangana ny loko miloko hitafy ny lahatsoratray izahay. Safidintsika ny fitaovana mahitsizoro (Rectangle Tool, lakile M) ary tsindrio na aiza na aiza ao amin'ny antotan-taratasinay. Avy eo dia hisokatra ny varavarankely kely iray izay hahafahantsika miditra amin'ny fandrefesana ny mahitsizoro: tsy maintsy apetrakao ny fandrefesana ny antontan-taratasinao. Raha ho ahy, 570 x 300px. Tsindrio OK ary hiseho eo amin'ny efijery ilay efamira izay noforoninay.
Ankehitriny dia tsy maintsy ataontsika tsara izany. Mba hanaovana izany dia hofidintsika ny zana-tsipìka mainty eo amin'ny baraovana, (Fitaovana fifantenana, V key). Miaraka aminy no tsindrio eo amin'ny sisin'ny tsanganana atsimo ary, TSY MISY MIVOAKA, dia hotaritarintsika ny sisin-tany mandra-pahatongany hifanindry amin'ny sisin'ny antontan-taratasy.
Ny background dia efa vita, fa amin'ny toerana misy anao dia ho hitantsika fotsy miaraka amin'ny sisintany mainty. Fotoana hanovana an'ity! Miaraka amin'ny zana-tsipika mainty voafantina ho fitaovana (Selection Tool, bokotra V), dia tsindrio ny mahitsizoro. Mandeha amin'ireo boaty miloko roa eo amin'ny farany ambanin'ny boaty misy ny fitaovana isika: ilay eo alohany dia mifanitsy amin'ny fenoy loko ny tarehintsika ary, ilay ao aoriana, dia manondro ny TRAZO. Amin'ny alàlan'ny default dia hanana ny famenoana loko fotsy sy ny loko sisin-tany isika. Tsindrio ny boaty famenoana sy ny mpanangona loko (Mpaka loko). Ankehitriny, azonao atao ny misafidy ny loko tadiavinao ho an'ny mombamomba anao. Raha ho ahy dia manga izany. Vantany vao voafidy, tsindrio OK ary ho hitanao ny telozoro miloko.
Andao izao esory ny sisiny. Tsindrio eo amin'ny boaty eo amin'ny sisin'ny zotram-pitaovanay. Ankehitriny, eo ambanin'io kianja io ihany, dia misy kianja fotsy kely misy diagonaly mena. Tsindrio eo ... Ary izay ihany! Ity kianja ity dia milaza amin'ny Illustrator fa tadiavintsika ny fikorotanana tsy misy loko. Raha tadiavinay ho tsy misy loko koa ny famenoana ny efa-joro, dia tsy maintsy mifidy ilay boaty mifanaraka aminy isika ary tsindrio ilay boaty foana.
Ny dingana manaraka dia ny fanaovana gradient boribory eo afovoantsika. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mankany amin'ny fikandrana fisehoana isika (raha tsy hitanao eo amin'ny sisiny ankavanan'ny efijeryo izany, araka ny aseho amin'ny sary, mankanesa eo amin'ny menio ambony eo amin'ny fikandrana Illustrator anao ary mankanesa any Window> Appareance). Eto, amin'ny alàlan'ny default, ho hitantsika ny safidin'ny Fenoy miaraka amin'ny loko efa napetrantsika tao amin'ny efajoro sy ny safidy Stroke (stroke na contour), izay hiaraka amin'ny Safidy foana. Safidy farany iray ny Opacity (opacity). Eo ambanin'ny varavarankely dia misy efamira kely roa. Ny iray misy sisiny mainty midadasika ary ny iray manana sisin-tany manify. Safidintsika ilay tsara, ho mamorona fenitra vaovao (Fenoy). Ankehitriny, eo amin'ny efamira miloko amin'ny famenoana vaovao noforoninay dia tsindrio. Zana-tsipika iray no hiseho eo amin'ny ilany ankavanana ary hifidy isika, avy amin'ireo santionany miloko rehetra izay miseho, ilay iray mifanentana amin'ny gradient mainty boribory.
Mamorona fenitra vaovao izahay (Fenoy)
Fisafidianana ny valin'ny gradient boribory
Manokatra fizarana vaovao izahay izao amin'ny fipihana ny zana-tsipìka eo amin'ny ilany havia amin'ny Fenoy ary tsindrio ilay teny Opactiy, hanovana ny fomba hampiharana ny soson-tsinay. Rehefa tonga eo dia mifidy ny safidy isika petaho takela (Overlap).
Hanao faribolana fotsy eo afovoan'ny antontan-taratasinay izahay. Mba hanaovana izany dia mifidy ilay fitaovana isika Fitaovana Ellipse, izay ho "ao anatin'ny" Rectangle Tool. Raha te hisafidy azy io dia mila manao tsindry lava isika, tsy mamoaka, miandry ny hisehoan'ny safidy. Raha vantany vao miseho izy ireo, TSY MISY MAMINDRA, dia esorintsika amin'ny alàlan'ny Elipse Tool ny famokarana ary avoakanay.
Mamorona boribory lavorary izahay (noho izany, tsindrio sy sintomina izahay rehefa mitazona ny lakilen'ny Shift amin'ny klavintsika). Ny zavatra ara-dalàna dia ny fivoahan'ny boribory miaraka amin'ny masontsivana mitovy amin'ilay gradient teo aloha izay nataontsika, noho izany dia mila manova ny sandan'ny famenoana isika.
Ankehitriny dia hataontsika eo afovoany izany. Mandeha Window> Manitsy ary, AMIN'NY CIRCLE voafantina, tsindrio ny safidy aseho amin'ny sary.
Safidintsika ny fitaovana Text (Type Tool, lakile T) ary soratantsika ny lahatsoratra tadiavinay. Raha ny aminay dia nisafidy ny endritsoratra izahay BadaBoom BB, izay azonao sintonina avy ao amin'ny DaFont.
Andao havadika kely io izao. Kitiho havanana amin'ny lahatsoratra> Transform> Seara. Ampahafantarinay amin'ny Vertical ny sanda -8º ary tsindrio OK.
Ataontsika mifantoka amin'ny fomba nitodianay ilay faribolana fotsy ny soratra.
MANAMPY NY STYLE
Miaraka amin'ny lahatsoratra voafantina, mandeha amin'ny safidy izahay zavatra eo amin'ny menio ambony ary safidio Expand ary, eo am-baravarankely izay aseho, Ok. Dia ataovy tsindrio havanana amin'ny antsipiriany amin'ny lahatsoratra ary safidio ungroup (Ungroup).
Andao hiverina ity Panel tontonana. Safidio ny fenony mainty ary kitiho ny kisary 'fx' misafidy Làlana> Làlana offset. Ampidiro, amin'ny Offset, 8px. Ao amin'ny Joins, Round. Ary amin'ny fetra Miter, 4.
Tsindrio indray izao ilay kisary 'fx' ary safidio Distorter & Transform> Transform ary miditra:
Amin'ny mizana: marindrano> 100% mitsangana> 100%
Mihetsika: marindrano> 7px mitsangana> 12px
Andao izao manampy fameno hafa. Tsindrio ny kisary amin'ny kianja eo amin'ny sisin-tany manify ary mifidiana loko maivana. Ohatra, fotsy.
Manampy fameno iray hafa izahay. Raha ny anay, ny loko volomboasary. Hanampy ny vokany fanovana isika. Tsindrio indray ilay kisary 'fx' ary mifidiana Distor & Transform> Transform ary miditra:
Mihetsika: marindrano> 2px mitsangana> 2px
Hametraka ilay drafitra mainty eo isika. Misafidy ny loko mainty amin'ny fikorotanana ary omentsika 3px izany. Mahay! Ankehitriny mba hamonjy rakitra> tahirizo. Raha tehirizina ao amin'ny .jpg, rakitra> fanondranana (ary ao no hisafidiananao ny endrika)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » sary » Vokatry ny tantara an-tsary (tutorial ho an'ny Adobe Illustrator)